Tropical Dutu Elsa inopfuura padyo neFlorida Keys ine mashoma madhivhiti
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Tropical Dutu Elsa inopfuura padyo neFlorida Keys ine mashoma madhivhiti
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo Florida Keys Overseas Highway yakavhurika uye inoshanda, sezvakaita Key West International Airport uye Florida Keys Marathon International Airport.
Vakuru veFlorida Keys nevashandi vezvivakwa vanongotaura zvinokanganisa zvishoma padivi pecheni yechitsuwa.
Keys zvinoshandiswa zvakati hapana magetsi akadzima uye kutaurirana kwaive kwakasimba.
Mamiriro ekunze akafanana nezhizha akaita mamiriro ekunze ari kudzokera kuKeys Chitatu
Tropical Dutu Elsa akapfuura padhuze ne Lower Florida Keys uye Key West Chipiri, Chikunguru 6, kuchisiya chete madiki madiki.
Sekureva kwevakuru veNational Hurricane Center, panguva yayo yepedyo neketani yechitsuwa cheKeys kwakatenderedza masikati eChipiri, nzvimbo yedutu iri yaive mamaira makumi mashanu nemashanu kumadokero kweKey West. Panguva iyoyo Elsa yaive dutu remhepo ine 55 mph mhepo, asi mhepo dzakanyanya dzakasimba Key West yainzwa kunge dzaive 60-40 mph sekureva kwevafanotaura kuFlorida Keys National Weather Service Office.
The Florida Keys Overseas Highway yakavhurika uye inoshanda, sezvakaita Key West International Airport uye Florida Keys Marathon International Airport.
Zvekushambadzira nendege mabasa kuKey West International anofanirwa kudzoka kune akajairwa masikati nepakati peChitatu, sekureva kweMonroe County Airports Director Richard Strickland Akakurudzira vatakuri kuti vataure nendege kuti vasimbise nguva dzekubva nekusvika.
Vakuru vemakiyi nevashandi vezvivakwa vanongotaura zvinokanganisa zvidiki padivi pecheni yechitsuwa. MuKey West, mutauriri Alyson Crean akati mimwe miti yakatemwa uye yakavharika mvura yemadutu yakacheneswa nevashandi veguta. Mimwe migwagwa yemuguta yakazara nemvura, asi nemusi weChipiri masikati mvura yakanga yaderera.
Kubva neChipiri manheru, maKeys ekushandisa akataura kuti hapana kudzimwa kwemagetsi uye kutaurirana kwaive kwakasimba.